Qaxootiga Yemen oo kusoo qulqulaya Jabuuti | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 15, 2015	0 168 Views
Djibouti – Iyada oo wali dagaallo ay ka socdaan gudaha dalka Yemen, in-ku-dhow 120,000 oo qaxooti ah ayaa kasoo cararay dalkaas. Tira ku dhow 30,000 oo kamid ah kuwa qaxa kaga soo tallaabay Gacanka Cadmeed ayaa ku nool gudaha Xerada Qaxootiga ee Markazi oo ku taalla dalka Jabuuti.
Taniyo dhamaadkii September, tirada ku nool xerada qaxootiga ee Markazi ayaa rubuc laballaabantay kuwaas oo isugu jira caruur iyo haween nugul oo qaarkood u baahan daryeel caafimaad.
Walow ay isku soo beegmayaan qulqulka qaxootiga kusoo shubmaya xerada Markazi ee Jabuuti iyo kororka baahiyeed ee aasaaska noloshooda, hey’adaha caafimaadka iyo kuwo Aadannimada waxay ka deyrinayaan inaan loo heli karin kaalmo halhaleel ah oo lala gaaro dhibanayaasha qaxootiga ah.
Previous: Golaha Shacbiga oo dalbaday in dalka laga saaro KDF
Next: Safaaradda Hindiya oo xafiiskeeda furaneysa
Haweeneyda 50-kii sanno u taagneyd korinta Carruurta Agoomada.